Miisaaniyadda loogu talo-galay Doorashada & cudur-daarka Wasiirka Maaliyadda ee muddo-dhaafka | Somaliland.Org
Miisaaniyadda loogu talo-galay Doorashada & cudur-daarka Wasiirka Maaliyadda ee muddo-dhaafka
April 26, 2010	Hargeysa (Somaliland.Org)- Wasiirka Maaliyadda Somaliland Cawil Cali Ducaale, ayaa maanta Golaha Wakiilada hortegay, isla markaana horgeeyay odoroska Miisaaniyadda sanadkan 2010 ee muddo-dhaaftay.
Fadhigii maanta ee Golaha Wakiilada Somaliland oo ka dhacay Hoolka shirarka ee Golaha Guurtida oo la filayo in dhawaan la dumiyo, si loo dhisme casriyaysan looga sameeyo halkaa, waxa guddoominayay Guddoomiyaha Golahaas Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro).
Wasiirka oo maanta Golaha hortegay, isla markaana khudbad ka jeediyay, ayaa sheegay in Miisaaniyaddan ku jirto Lacagtii Doorashada Madaxtooyada iyo sidoo kale Lacagtii Doorashada Golaha Wakiilada. Wasiirka Maaliyaddu wuxuu xusay in Lacagta Miisaaniyadda sanadkani ay ka badan tahay tii sanadkii hore.
Mar uu Wasiirku ka hadlayay xaddiga Miisaaniyadda sanadkan 2010, waxa uu sheegay in ay dhan tahay 363-Bilyan oo Somaliland Shiling ah, halka tii sanadkii hore ay dhamayd 265-Bilyan oo Shilin.
Wasiirka oo ka hadlayay sababta keentay in ay muddo-dhaafto oo muddo afar bilood ah ay dhaafto wakhtigii ay sharciyan ahayd in la horgeeyo Golaha Wakiilada, waxa uu sheegay in ay qaar ka mid ah Wasiirada Xukuumaddu codsadeen in lala sugo ansixinta Miisaaniyadda. “Waxa keenay habsan muddada Miisaaniyaddu waxa weeye, waxa jiray Wasiiro kala maqnaa oo qaarkood ku maqnaayeen Laascaanood, qaarkoodna dibedda oo naga codsaday in aanu la sugno.” Ayuu yidhi Wasiirku.
Wasiirku wuxuu ku dheeraaday Miisaaniyadda iyo qaybaha ay u kala qorshaysan tahay, waxaanu sheegay in kharashka iyo dakhliga Dawladdu kala badan yihiin oo uu sheegay in Ciidamada iyo adeegyada bulshada oo kharashkoodu kordho sanad kasta.
Cawil Cali Ducaale wuxuu sheegay in Lacagta ay ugu talo-galeen Doorashada Madaxtooyada ee la filayo inay dalka ka dhacdo ay dhan tahay 2-Milyan oo Dollar, isla markaana ay 1-Milyan sii bixiyeen, halka Milyanka kale ee hadhayna ay bixin doonaan marka Doorashada la gaadho waqtigeeda.
Gebogebadii, Wasiirku wuxuu Mudanayaasha Golaha Wakiilada u jeediyay in ay ansixiyaan Miisaaniyadda sanadkan oo uu sheegay inay muhiim tahay, waxaanu yidhi, “Tartan baanu ku jirnaa ee noo soo duceeya in aanu guulaysano, idinkana waxaanu idiinku ducaynaynaa in aad soo noqotaan, Miisaaniyaddana sidaa ku ansixiya.”
Previous PostHalkan ka daawo Kormeer ay Hoggaanka KULMIYE ku soo mareen dadkii waxyeellada Roobabku gaadhayNext PostM/weyne-xigeenka oo ka hadlay arrimaha Doorashada iyo xaaladdiisa Caafimaad	Blog